Ezona zicoci zicocekile zingabizi kakhulu ngo-2022: isikhokelo sokuthenga kunye nonikezelo olumangalisayo
Umshini wokucoca iirobhothi
umtshayelo vacuum cleaner
Ufuna thenga isicoci se vacuum esitshiphu? Imarike yokucoca ivacuum ikhule ngesantya esikhawulezayo kule minyaka idlulileyo. Siye sakwazi ukubona indlela ukukhethwa kwabacoci be-vacuum kwiimarike kukhule. Kukho iintlobo ezininzi zeempawu kunye neentlobo ezahlukeneyo ezikhoyo. Bonke baneempawu zabo kwaye kwiimeko ezininzi banokusetyenziswa okuthe ngqo, kodwa ukhetho lubanzi kakhulu. Ke abasebenzisi banokuninzi abanokukhetha kuzo.
Xa sisiya kuthenga i-vacuum cleaner entsha, ukhetho lunokuba nzima. Nangona kukho izinto ezimbalwa ezifunwa ngumthengi ngamnye. Sifuna isicoci sevacuum esisemgangathweni kodwa esingabizi kakhulu. Oko kudla ngokuba ngumnqweno wenkoliso yabantu. Ngesi sizathu, sikushiya ngezantsi ngokhetho lwezicoci zokucoca ezingabizi kakhulu.
Zonke ziyimodeli esemgangathweni kodwa amaxabiso azo afikeleleka. Ke ukuba ukuhlaziya isicoci sakho sokucoca akucingi ukuba ngumzamo ogqithisileyo. Sikuxelela ngakumbi ngazo zonke ezi modeli zingezantsi.
Izicoci zokufunxa ngexabiso eliphantsi
Senze ukhetho lweemodeli ezininzi. Zonke ziyimodeli ezimele ukuba nexabiso elifikelelekayo ngakumbi kubasebenzisi, kodwa ngaphandle kwale ntsingiselo yokuyeka umgangatho. Ngezantsi sikushiya ngetafile enezona nkcukacha zineenkcukacha nganye kwezi modeli. Emva kwetafile sithetha ngabanye ngabanye ngokubanzi.
Ndiyabulela kule datha unokufumana ingcamango ecacileyo malunga nokuba yeyiphi imodeli enokuthi ibe yinto enomdla kakhulu ekuthengeni.
I-Xiaomi Robot Vacuum Mop...
Isicoci seCecotec Robot vacuum kunye ...
Lefant F1 Irobhothi Vacuum...
Isicoci sevacuum yomtshayelo ngaphandle...
Isicoci seCecotec Vacuum ngaphandle...
Amandla eRowenta Swift ...
Ezona zicoci zokufunxa ngexabiso eliphantsi
1 Izicoci zokufunxa ngexabiso eliphantsi
2 Ezona zicoci zokufunxa ngexabiso eliphantsi
2.1 Cecotec Ukugqwesa 1090 Conga
2.2 I-Ecovacs Deebot OZMO 900
2.4 I-Rowenta Compact Power Cyclonic RO3753
2.5 I-Kärcher WD3
2.8 Isicoci seVacuum esingenazintambo ezingenazintambo
3 uhlobo lwe-aspirator
3.7 2 kwi-1
3.8 akukho bag
4 Iibrendi ezigqwesileyo zokucoca ivacuum
5 Indlela yokukhetha i-vacuum cleaner
5.2 Windows RT
5.3 Iintlobo zesihluzi
5.5 Akukho nto ikuqinisekisayo?
Nje ukuba ezona nkcukacha zibaluleke kakhulu zezi zicoci zofunxa zibonisiwe, ngoku singaqhubeka sithethe malunga nemodeli nganye kwezi nzulu ngakumbi. Ngale ndlela unokufunda ngakumbi malunga nezi modeli kunye nokusebenza kwazo. Ke, ukuba kukho enye ehambelana neemfuno zakho, uya kuba nakho ukuyazi kwangoko.
Cecotec Ukugqwesa 1090 Conga
Sivula uluhlu ngesi sicoci serobhothi esiphuma kwi-Cecotec, uphawu olwaziwayo kwicandelo lokuvelisa izicoci zerobhothi ezahlukeneyo. Yimodeli, njengazo zonke iirobhothi, lukhetho oluhle kakhulu. Kuba konke okufuneka sikwenze kukuyicwangcisa kwaye iqala ukucoca imigangatho yendlu yethu. Icoca ngamaxesha amane kwaye ineendlela ezi-6 zokucoca. Ayivacuum kuphela, kodwa iphinda imophu kunye nokutshayela. Ke ngoko, yenza ukucocwa okupheleleyo kwendlu. Ukongeza, isebenza ngokugqibeleleyo kuzo zonke iintlobo zemigangatho.
Xa ucoca malunga nendlu, ngenxa yeteknoloji yayo, ayiyi kungqubana nefenitshala, abantu, iikona okanye ukuwa phantsi kwezitebhisi. Ke ngoko, sinokuhlala phantsi kwaye sivumele irobhothi ukuba yenze umsebenzi wayo. Inebhetri eyinika uluhlu lwemizuzu eyi-160. Xa ibhetri sele iza kuphelelwa, irobhothi ibuyela ngqo kwisiseko sayo ukuze igcwalise ngokupheleleyo. Ngoko asimele sizikhathaze ngaloo nto. Inetanki enomthamo ophezulu, osivumela ukuba sicoce indlu yonke ngaphandle kokuyikhupha.
Njengesihluzo sine-HEPA yokucoca, oku kuthetha ukuba sinokuyicoca ngokulula. Yibeke nje phantsi kwempompo kwaye uyomise. Ngaloo ndlela, sele icocekile kwaye ilungele ukusetyenziswa kwakhona. Yindlela ekhululekile kakhulu evumela ukuba sigcine imali kwizihluzi. Le robhothi nayo igqame ngokuba ayingxoli. Irobhothi iza nezinto ezibandakanyiweyo, kubandakanya iibrashi ezininzi, isiseko sokutshaja, isilawuli kude kunye neadaptha.
I-Ecovacs Deebot OZMO 900
Nangona ingeyiyo yodwa kolu luhlu, enye yezona zinto zibalaseleyo zale Ecovacs isicoci somgangatho kukuba iyahambelana ne-Alexa kunye nezicelo zeselfowuni, ukuze siyazi ukuba iphi ngamaxesha onke. Ukongeza, inolunye uhlobo lobukrelekrele, kule meko iSmart Navi 3.0 Navigation esebenza ngokubulela kwilaser ekuvumela ukuba wazi apho uya khona kwaye yenza imephu yekhaya lethu.
Njengoko sele sitshilo, kunye ne-ECOVACS app imiqobo ebonakalayo inokudalwa ukusuka kwiselula ukubeka phambili okanye ukuvimba iindawo ukuze irobhothi icoce kuphela apho sifuna khona. Ngakolunye uhlangothi, sinokusebenzisa enye yeendlela zayo zokucoca ezine ukuqinisekisa ukuba ihlambulula apho, njani kwaye nini sifuna.
Kwindawo yesibini sifumana le modeli yohlobo olufanayo, nangona ngeli xesha sisicoci sevacuum yomtshayelo we-2-in-1. Oku kuthetha ukuba kubandakanya isicoci esiphathwa ngesandla esinokusikhupha kwaye sicoce iindawo ezithile ngakumbi ezifana isofa okanye izihlalo zemoto. Siyabulela kule nto sinokuqhuba ukucoca nzulu kwendlu. Ibalasele ekusebenziseni itekhnoloji ye-cyclonic, itekhnoloji enika amandla amaninzi. Ukongeza, oku kuthetha ukuba ayilahleki amandla ngokuhamba kwexesha. Into enikezela ngoxolo lwengqondo kubasebenzisi.
Yimodeli elula kwaye kulula kakhulu ukuyisebenzisa ekhaya. Inobunzima obuncinci, nto leyo eyenza ukuba ilawuleke kakhulu. Ngokukodwa ukuba sinendlu enezinyuko, ukuze kungabikho nzima ukuyithwala ukusuka kwenye indawo ukuya kwenye. Le modeli isebenza ngeentambo, kunye nentambo enayo imilinganiselo ye-6 yeemitha. Ke siyakwazi ukujikeleza indlu ngokukhululekileyo naphakathi kwamagumbi ngaphandle kokuhlala siqhaga iplagi kunye nokukhulula. Ukongeza, esi sicoci se-vacuum vacuum sisebenza kakuhle kuzo zonke iintlobo zemigangatho, kubandakanya nemigangatho yokhuni.
Inediphozithi enomthamo we-1 ilitha. Oku kusinika umthamo owaneleyo wokucoca indlu yonke ngaphezu kwesihlandlo esinye ngaphandle kwengxaki. Ukongeza, ukukhutshwa kwetanki kulula kakhulu kwaye yindlela esiyicoca ngayo. Oku kuyenzeka nangezihluzi, ukugcinwa kwazo kulula. Kuba sisihluzo HEPA. Ngoko ke, kufuneka sizicoce. Ngokubhekiselele kwingxolo, ayisiyiyo eyona ilumkileyo, kodwa ivelisa umlinganiselo ofanayo wengxolo njengesicoci sevacuum eqhelekileyo. Kulula kakhulu ukuyigcina kuba ayithathi ndawo. Esi sicoci sivacuum siza nemilomo embalwa eyongezelelweyo ebandakanyiweyo.
I-Rowenta Compact Power Cyclonic RO3753
Kwindawo yesithathu sifumana le Rowenta vacuum cleaner yemveli, ubuncinane ngokoyilo. Isebenzisa itekhnoloji ye-cyclonic, eyinika amandla amakhulu kunye namandla okufunxa. Ukongeza, ayilahleki la mandla ngokuhamba kwexesha. Ke ngoko, sinokukonwabela ukusetyenziswa kwayo ixesha elide ngokukhululeka okukhulu. Isiqinisekiso esibalulekileyo kubantu abaninzi. Isebenza kakuhle kakhulu kuzo zonke iintlobo zemigangatho, kodwa ngokukodwa kwimigangatho enzima (ilitye, i-tile ...). Ke ukuba unalo uhlobo lomgangatho, sisicoci esifanelekileyo kubo.
Isebenza ngetanki enomthamo weelitha ezi-1,5 esinokuyikhupha ngokulula kakhulu. Ukongezelela, yimali eyaneleyo yokukwazi ukucoca indlu yonke ngaphandle kwengxaki. Ikwanaso nesihluzo se-HEPA, nto leyo ethetha ukuba sinokuyihlamba. Faka nje isihluzo phantsi kwempompo ukususa ukungcola. Emva kokuba oku kwenziwe, siyayiyeka yome kwaye siyibuyisele kwi-vacuum cleaner. Konke oku ngaphandle kokuphulukana namandla okufunxa. I-Rowenta vacuum cleaner inentambo, inentambo ye-6,2 yeemitha. Oku kusivumela ukuba sijikeleze indlu ngokukhululeka okukhulu.
Inobunzima be-6,8 Kg, kodwa ungakhohliswa ngumfanekiso, kuba imodeli elula ukuyiphatha kunye nokuhambahamba endlwini. Enkosi kuyilo lwayo olunamavili, sisicoci esifunxayo esihambayo. Ukongezelela, xa kuziwa ekugcinweni akuthathi indawo eninzi, ngoko kulula ukufumana indawo yokugcina. Ivelisa ingxolo efanayo njengesicoci sevacuum eqhelekileyo, ngoko ke akukho nto imangalisayo kulo mba. Asiyongxolo icaphukisayo kakhulu.
Kwindawo yesine sifumana le vacuum cleaner esetyenziswa kakhulu njengesicoci se-industrial vacuum, nangona sinokuyisebenzisa kwiimeko ezininzi ezahlukeneyo. Kodwa, ivelele ngakumbi ngokuba yimodeli enamandla kakhulu enika amandla amakhulu okufunxa. Ngale ndlela uya kukwazi ukususa konke ukungcola okuqokelelweyo ngokulula okukhulu kwaye ngempumelelo kakhulu. Ukongeza, ikwasebenza nobumdaka obumanzi, ngoko ke isivumela ukuba sisebenzise okuninzi kunesicoci sevacuum eqhelekileyo kulo mba. Yiyo loo nto iguquguqukayo.
Inetanki enkulu yomthamo, yiyo loo nto yenzelwe ukusetyenziswa kwimizi-mveliso apho ukungcola okuninzi kuqokelelana. Oku kusinika ithuba lokukwazi ukucoca izithuba ezinkulu ngaphandle kokukhupha yonke imizuzu embalwa. Ngoko ukucoca kusebenza kakhulu ngandlela zonke. Ukongeza kukucoca, ikwanomsebenzi wokuvuthela osebenza kakuhle kakhulu. Ngoko unako ukwenza ukucoca okunzulu kakhulu.
Yimodeli enobunzima be-7,66 kg. Kodwa, ngaphandle kweli nani, ngumzekelo esinokuwuphatha ngokulula kakhulu. Ukongeza, ngenxa yoyilo lwamavili amane, iyahamba kakhulu kwaye izinzile. Ke ngoko, ayisayi kuwa okanye incipha nangaliphi na ixesha ngelixa siyisebenzisa. Ngoko sikhathalela kuphela ukucoca. Inentambo enobude obuziimitha ezi-4. Ayilona lide, kodwa lisinika ukuhamba ngokwaneleyo.
Le Braava 390t yenzelwe ukucoca amagumbi amakhulu amaninzi. Inendlela yokukhuhla kathathu kunye iadapt yayo 2.0 kunye iityhubhu navigation enceda le robot encinane ukugcina umkhondo indawo yayo. Njengokhetho, sinokukhetha ipasi enye ukuba sifuna kuphela ukususa ubumdaka, uthuli, iinwele zesilwanyana sasekhaya kunye nezinto ezimelene nazo okanye sisebenzise ukupasa kwayo kathathu ukukhuhla ukuya kuthi ga kwi-33m²
iRobot Braava 390t, irobhothi...
Ngokubhekiselele kwezinye izinto, ibandakanya amalaphu ama-4 e-microfiber, ezimbini kuzo zokukhuhla kunye nezimbini zokucoca, okuthetha ukuba inokomisa imophu.
Le modeli ilandelayo sisicoci sevacuum esiqhelekileyo esiphume izandla ngokunika umsebenzi osebenza kakuhle nongenangxaki. Yeyona modeli yakudala kakhulu yokwenza ukucoca indlu. Ivumela ukuba sitshize kuzo zonke iindidi zemigangatho kwaye inamandla awoneleyo. Ayilona inamandla kuludwe, kodwa ayishiyi naluphi na ukungcola ngaphandle kokutshayela nangaliphi na ixesha. Ngoko izalisekisa ngokugqibeleleyo umsebenzi wayo ngamaxesha onke.
Isiseko seAmazon –...
Inetanki enomthamo we-1,5 ilitha, esivumela ukuba sicoce indlu ngamaxesha amaninzi de ibe igcwele. Ukutsalwa kunye nokucocwa kwale deposit kulula kakhulu. Ngoko ayifuni kugcinwa kakhulu. Kwenzeka into efanayo ngesihluzo se-HEPA esiyibandakanyayo. Xa siqaphela ukuba inobumdaka obuninzi obuqokelelweyo, kungcono ukuyimanzisa, yome kwaye uyisebenzise kwakhona. Ngale ndlela ibuyela ekubeni namandla okufunxa aphezulu njengosuku lokuqala. Indlela elula kakhulu.
Isebenza ngeentambo, kule meko inekhebula leemitha ezi-5. Oku kusenza sikwazi ukuhambahamba kakuhle endlwini kwaye kusinika inkululeko eninzi. Ngokuphathelele ubunzima, lo mzekelo ulinganisa i-4,5 kg. Ngoko ke, ayisisona sezona zicoci zinzima, ngoko kulula ukuhambahamba endlwini size sihambe nayo ukuba kufuneka sinyuke izinyuko. Ukongeza, ngenxa yoyilo lwayo ngamavili, ihamba kakhulu, ngoko ke, akuyomfuneko ukuba ukhathazeke kwaye uyithwale ngamaxesha onke. Yenza ingxolo efanayo neyesiqhelo yesicoci se vacuum. Ukongeza, le modeli iza nezixhobo ezifakiweyo.
Isicoci seVacuum esingenazintambo ezingenazintambo
Kwindawo yokugqibela sifumana esi sicoci siphathwa ngesandla. Isicoci sevacuum sobukhulu obuncitshisiweyo kwaye senzelwe ukuba sisisebenzise kwiindawo apho isicoci sevacuum eqhelekileyo singenakufikelela kuyo. Ngoko ke, lukhetho olukhulu lokusebenzisa kwi-sofa okanye kwizihlalo zeemoto. Iziza ezicoca ngokuntsokothileyo kwaye zifuna ukuchaneka okukhulu. Ndiyabulela kule modeli kuya kuba lula kakhulu ukufikelela kule mimandla ukuze bahlale becocekile.
Kwimodeli yesayizi encinci inamandla amaninzi. Ngoko ke kuya kusinceda ukuba sigqibe nokuba ngowona mdaka unzima kakhulu. Ngoko i-sofa iya kuhlala ikhanya. Ukongeza, inobunzima obuncinci, okwenza ukusetyenziswa kwayo kube lula kwaye kube lula. Ilawulwa kakhulu, ekwanceda kakhulu, ekubeni umsebenzi wokucoca kule mimandla awuhlali ulula. Le modeli isebenza ngaphandle kweentambo. Inebhetri enokuzimela kwemizuzu engama-30 esinokuyihlawula.
Inediphozithi esinokuyikhupha nangaliphi na ixesha ngokulula okukhulu. Ukongezelela, ukucocwa nokugcinwa kwayo kulula kakhulu. Kukwanjalo nakwicebo lokucoca elibandakanyiweyo. Sisihluzo esihlambekayo. Ngoko xa sibona ukuba ilahlekelwa amandla athile, sihlamba isihluzo phantsi kwempompo, siyiyeke yome kwaye siyibuyisele. Ngaloo ndlela, isebenza ngokugqibeleleyo kwakhona. Ibandakanya izincedisi ezininzi, njengemilomo yemigangatho eyahlukeneyo kunye nemisebenzi.
Kwindawo yokugqibela sifumana le Rowenta broom vacuum cleaner. Imodeli emangalisayo kuba inamandla kakhulu, ukuze sikwazi ukuphelisa uthuli kunye nokungcola okuqokelelwe endlwini yethu. Isebenza kakuhle kakhulu kuzo zonke iintlobo zemigangatho enkosi kwibrashi yayo, eyilelwe ukwenza njalo. Ke ngoko, nokuba unemigangatho yokhuni, ungayisebenzisa ngaphandle kokukhathazeka. Kusiqinisekisa ngococi olusebenzayo noluhlala luhleli.
I-Rowenta Air Force kakhulu...
Le modeli isebenza ngaphandle kweentambo. Inebhetri enoluhlu lwemizuzu engama-45. Ixesha ekufuneka lanele ukucoca indlu yonke. Emva kokuba ibhetri iphelile, siyifaka kwintlawulo. Kuthatha malunga neeyure ezisibhozo ukuhlawula ngokupheleleyo, enokuba nde kakhulu. Ngoko ke, kungcono ukuyihlawula rhoqo ebusuku. Ngoko ulungile kusasa ukuba ufuna ukucoca indlu. Lo mzekelo unetanki ekhutshwayo enomthamo we-0,5 ilitha.
Ikwanaso nesihluzo se-HEPA esinokucoca. Ngoko kufuneka uyimanzise phantsi kompompo, yiyeke yome kwaye uyibuyisele kwakhona. Siyabulela koku sinokuyonwabela isicoci sevacuum kwakhona ngokungathi lusuku lokuqala kwaye sitshayela ngamandla amakhulu kunye ngokuchanekileyo. Ngokubhekiselele kwingxolo, yenza ingxolo ngakumbi kunezinye iimodeli kuluhlu, nangona ingeyongxolo ecaphukisayo okanye intloko ebuhlungu.
Njengoko besesitshilo ngaphambili, zininzi iintlobo zezicoci zokufunxa ezikhoyo namhlanje. Nganye inezinto zayo ezikhethekileyo ezenza zibengcono kwiimeko ezithile. Ke ngoko, kulungele ukucaca malunga nokuba loluphi uhlobo lwesicoci esisifunayo okanye esisikhangelayo. Kuba iya kwenza ukhangelo lwethu luchaneke ngakumbi. Sikuxelela ngakumbi malunga neentlobo ezahlukeneyo zokucoca i-vacuum ngezantsi.
Isicoci se vacuum mite
ulwelo vacuum cleaner
vacuum cleaner izilwanyana
2 kwi-vacuum cleaner e-1
vacuum cleaners kwimizi-mveliso
Izicoci zevacuum ezingenazintambo
izicoci zokucoca amanzi zokucoca amanzi
isicoci se-cyclone vacuum
isileyiti vacuum cleaner
izixhobo zokufunxa eziphathwa ngesandla
Isicoci se-robot vacuum kunye ne-mop
Jonga izicoci ze-sled vacuum
Aba ngabacoci bevacuum esibaziyo sonke. Ngaloo ndlela, bagcina i-classic design kunye nemilo. Nangona itekhnoloji ihambele phambili kakhulu kwaye ihlala inamhlanje kwaye inamandla. Ziimodeli ezisebenza kakuhle kuzo zonke iintlobo zemigangatho kwaye singacoci nje uthuli lwendlu, kodwa nazo zonke iintlobo zokungcola.
Jonga izicoci zokucoca umtshayelo
Aba bacoci bevacuum bagqama ekulinganiseni ubume bomtshayelo. Ngoko ke zithe nkqo kwaye zande. Zihlala zisebenza ngamandla ebhetri kwaye zithe thaa amandla angaphantsi kunesicoci sevacuum sakwantu. Nangona begqamile ngenxa yokukhanya, ukulawuleka kunye nonyango lwabo olukhulu lomphezulu.
Jonga i-robot vacuum cleaner
Iklasi efumana ubukho obuninzi kwiminyaka yakutshanje. Ziyindlela ekhululekile kakhulu kuba konke okufuneka sikwenze kukucwangcisa kwaye irobhothi iya kukhathalela ukucoca indlu kuthi. Basebenza ngeebhetri kwaye bahlala begqamile kwimilo yabo engqukuva ngendlela yepleyiti. Nangona, zikwabiza kakhulu kunesicoci sevacuum sakwantu.
Ezi zicoci zokucoca ezinobungakanani obuncinci onokuthi uzibambe ngesandla sakho. Zenzelwe ukufikelela kwiikona ezingafikeleliyo isicoci se-vacuum esiqhelekileyo, njengezihlalo zeemoto okanye i-sofa. Ziyakwazi ukulawuleka, zinobunzima obuncinci kwaye ixabiso lazo lidla ngokungabizi kakhulu. Ezinye iivacuum zentonga ziza ne vacuum eyakhelweyo ephathwa ngesandla.
Jonga izicoci eziphathwa ngesandla
Jonga izicoci ze-cyclone vacuum cleaners
Abacoci beCyclonic vacuum bagqama ekudaleni isaqhwithi somoya esonyusa amandla okufunxa, sinceda ukwahlula ubumdaka ngokulula kwaye kananjalo. ayiphulukani nokusebenza ngexesha.
Jonga izicoci zokufunxa uthuthu
Ezi ntlobo zokucoca i-vacuum zenzelwe ukufunxa umlotha kwiindawo zomlilo, i-barbecues okanye ezinye iintlobo zemisebenzi ebangela ukuqokelela umlotha. Zinosetyenziso oluthe ngqo ngakumbi, nangona zikwafunxa uthuli kunye nokungcola. Kodwa umsebenzi wayo ophambili kukulahla uthuthu okanye i-sawdust.
Jonga i-2-in-1 vacuum cleaners
Ezi zizicoci zevacuum apho sifumana isicoci esingundoqo nesiphathwa ngesandla. Ngokuqhelekileyo ziyimodeli yomtshayelo oza kunye nesicoci esidibeneyo esiphathwa ngesandla. Ngoko unokucoca indlu yonke ngokuchanekileyo. Ekubeni une-vacuum cleaner yemigangatho kunye nenye yeendawo ezinjengeesofa okanye iikona ezifikelelekayo.
Jonga izicoci zevacuum ezingenabhegi
Luhlobo lwesicoci sevacuum esiyibona kwiimpawu ezininzi. Endaweni yokuba neengxowa zemveli apho ukungcola kugcinwa khona, zinesitya esisuswayo. Ngale ndlela, xa igcwalisa, sikhupha itanki kwaye siyikhuphe. Ngaloo ndlela, asichithi imali kwiibhegi. Ukongezelela, ukugcinwa kwezi madipozithi kulula kakhulu.
Jonga izicoci zokufunxa amanzi
Sijongene nohlobo olukhethekileyo lwesicoci se vacuum njengoko sifanelekile kwabo bantu baneengxaki zokungadibani nothuli okanye amangolwane. Ivumela ukuba sicoce indlu, kodwa inceda ukuhlambulula umoya ngenxa yokucoca amanzi. Siyabulela kuba sicocekile ngokunzulu indlu kwaye siqinisekisa ukuba umoya ugcinwa ucocekile kangangoko.
Jonga izicoci zemizi-mveliso
Ezi ntlobo zokucoca i-vacuum ziyilelwe ngakumbi ukucoca kwiindawo zorhwebo, iihotele okanye iindawo zokutyela okanye kwishishini. Ekubeni begqame ngokuba namandla amakhulu anokufunxa yonke into. Ngombulelo kula mandla, ukucoca okusebenzayo ngakumbi kunye nokusebenzayo kufezekiswa. Ke ngoko, ukusetyenziswa kwekhaya akuyena ndlela ilungileyo yokuyisebenzisa.
Iibrendi ezigqwesileyo zokucoca ivacuum
Xa sifuna into entsha yokucoca ivacuum sijonga kakhulu kwi-brand. Ngamanye amaxesha sinokufuna ukuthenga imodeli yohlobo olufanayo esele sinalo okanye sibheja kwiimpawu ezaziwayo. Ngaphandle kwamathandabuzo, uphawu lunempembelelo enkulu kwizihlandlo ezininzi. Kuba sikhetha ngokubanzi iibrendi esizaziyo okanye esizithembileyo. Ukukhethwa kweempawu kubanzi kakhulu namhlanje, nangona kukho ezinye ezikhethekileyo kuhlobo oluthile lwesicoci se-vacuum.
I-LIDL isicoci se vacuum
i-electrolux vacuum cleaners
I-Xiaomi Vacuum Cleaner
Luphawu lomenzi werobhothi zofunxa ngokugqwesileyo. Ngubani na ongayaziyo iroomba vacuum cleaners? Baye kwimarike malunga neminyaka engama-25, ngoko banamava amaninzi. Ukongeza, iirobhothi zabo zidla ngokuba zezona ziphambili kwaye zibonelela ngowona msebenzi ubalaseleyo. Ke ukuba ujonge isicoci serobhothi, ngaphandle kwamathandabuzo luphawu ekufuneka ulukhethile.
Enye yezona mpawu zibalaseleyo kwimarike. Ifemu enamava amakhulu kwiminyaka, ngoko iimodeli zayo zisiqinisekiso somgangatho kunye nokusebenza kakuhle. Benza iintlobo ezininzi zezicoci zokufunxa, ukusuka kwisileyi semveli, ukuya kumtshayelo, ukuya esandleni kunye nezinye ezi-2 kwisi-1. Fumana apha eyona mizekelo ibalaseleyo Rowenta vacuum cleaners.
Olunye uphawu olulwaziyo uninzi lwabasebenzisi kwaye lukwafana nomgangatho. Banamava abanzi kwimarike kwaye banenkxaso yabathengi, kuba luphawu abantu abaninzi ababheja kulo kuba besazi ukuba baya kufumana imveliso esemgangathweni. Benza iintlobo ezininzi zezicoci zokucoca (umtshayelo, isileyi, ukubamba ngesandla, umzi-mveliso...), Apha ungabona Bosch vacuum cleaners ikhethwa ngabasebenzisi.
Igama lisenokungavakali liqhelekile kwabaninzi, kodwa bayinkampani enamava kweli candelo. Ukongeza, i karcher vacuum cleaners Bagqama ngokwenza izicoci zevacuum ezinamandla kakhulu ezihlala zibonelela ngomsebenzi omkhulu. Ke ukuba ujonge isicoci sevacuum apho amandla ayinto ephambili, yenye yeebrendi ekufuneka ziqwalaselwe. Kwakhona benza iintlobo ezininzi (imizi-mveliso, uthuthu, imoto, isileyi...).
Luphawu olwaziwayo inxalenye enkulu yabathengi. Ngokubanzi kuba yifemu enemveliso eziphuma phambili kumgangatho wayo kunye nokusebenza kakuhle ekuhambeni kwexesha. Ngoko thenga isicoci se-dyson vacuum ikwasisiqinisekiso kunye nokhetho olukhuselekileyo onokuthi ujike kulo xa ukhangela isicoci sevacuum. Benza iindidi ezahlukeneyo zokucoca (isileji, umzi-mveliso, isandla, umtshayelo ...).
Nangona kunjalo ecovacs vacuum cleaners zintsha ngokwentelekiso, inyani yeyokuba inkqubo yabo yokukhangela, isoftware kunye nexabiso elikhuphisanayo libenze baba lolona khetho lubalaseleyo kwabo bafuna i-robot vacuum cleaner. Ukuba unomdla wokuthenga enye, unganqikazi ukujonga iimodeli zale nkampani.
Indlela yokukhetha i-vacuum cleaner
Xa uthenga i-vacuum cleaner kufuneka uthathe uluhlu lweenkcukacha kwi-akhawunti. Ekubeni ngale ndlela sinokwenza isigqibo ngokuchaneka okukhulu ngaphandle kokwesaba ukuthenga imodeli engafanelekanga. Kodwa, kubalulekile ukuba sicinge ngazo zonke kwaye sicinge ngamaxesha onke ukuba yintoni kanye kanye esiyifunayo. Konke oku kuya kwenza ukhangelo lwethu lube lula kakhulu. Kuba kubalulekile ukucinga ngesicoci sevacuum njengotyalo-mali lwekhaya lakho, awufuni kuthenga imveliso engayi kuhlangabezana neemfuno zakho.
Enye ingcaciso ebaluleke kakhulu xa ukhetha i-vacuum cleaner ngamandla. Nanini na xa sifunda iinkcukacha zevacuum cleaner sibona ukuba amandla abonisiwe. Nangona kubalulekile ukudibana nayo, kufuneka sithathe elo nani njengesalathiso. Ayisiyonto ehlala isixelela ukuba imodeli inamandla ngakumbi.
Kukho iimodeli ephepheni zinamandla amancinci kwaye eneneni zinqwenela ngcono. Ngenxa yesi sizathu, kuhle ukuba sithathele ingqalelo inani eliqhelekileyo elibonisa malunga namandla, kodwa kufuneka sithathe njengento ebonisa amandla abo okwenene.
Eyona nto inomdla kuthi kukuba isicoci sevacuum sinamandla. Ekubeni ngale ndlela siya kukwazi ukugqiba ngokungcola kunye nothuli oluqokelelwa ekhaya ngokukhawuleza kwaye lukhululekile. Kodwa, asifuni kwakhona isicoci sevacuum esinamandla kakhulu. Kuba oku kubangela ukuba ibambelele kuzo zonke iintlobo zemigangatho. Ngokufanelekileyo, isicoci sevacuum sinolawulo lwamandla. Ngale ndlela sinokumisela amandla esifuna ukuwasebenzisa ngokuxhomekeke kwimeko.
Ngokubanzi, izicoci ze-vacuum ezineentambo (ezo ziqhagamshelwe kwimibhobho engundoqo) zinamandla ngakumbi kuneebhetri. Ngoko ingcombolo ekufuneka ithathelwe ingqalelo. Oku akuthethi ukuba bangcono, kuba izicoci zokucoca ezisebenza ngebhetri nazo zimunca kakuhle. Kodwa kubalulekile ukuba siyazi oku kwaye sithathele ingqalelo le nkcukacha.
Kukho ezinye iinkcukacha ezinokusinceda kakhulu xa sikhetha esinye isicoci sevacuum kunesinye. Le yimiba enokuthi ingabinokubaluleka okufanayo njengamandla okanye uphawu, kodwa nayo inefuthe kwinkqubo yesigqibo. Ngoko ke, kubalulekile ukuba sizikhumbule.
Ukusebenziseka ngokulula kunye nokulula kokusetyenziswa kubalulekile. Sifuna ukukwazi ukujikeleza indlu ngokukhululekileyo ngalo lonke ixesha. Akunyanzelekanga ukuba utsale isicoci sevacuum okanye ukuba sinzima kakhulu. Kwakhona ukuba ayigqithisi ngelixa siyisebenzisa. Ngoko ke, ezi ntlobo zezinto kufuneka zihlolwe. Ngokukodwa ukuba ayinzima kakhulu kuwe, kuba ngaphandle koko umsebenzi wokucoca indlu uya kuba nzima ngakumbi kunokuba sele ukhona.
Ukugcinwa nokucocwa kwesicoci sevacuum ikwazezinye iinkcukacha ekufuneka zithathelwe ingqalelo. Kuba sifuna into engadingi xesha lininzi. Ukuba sinayo idiphozithi, into eninzi imodeli, ukucocwa kunye nokugcinwa kulula. Yisuse ngokulula itanki, yikhuphe kwaye uyimanzise ukususa nakuphi na ukungcola okuseleyo. Umsebenzi olula othatha nje imizuzu embalwa. Ukongeza, siyayonga kuba akuyomfuneko ukuba sithenge iibhegi.
Iimodeli ezininzi zinokukhanya kunye nesalathisi sebhetri. Ezi ziinkcukacha ezongezelelweyo ezinokusinceda senze ukusetyenziswa kwesicoci sevacuum kusebenze ngakumbi. Ngokungathandabuzekiyo yimiba eyakhayo neluncedo. Nangona bengenjalo okanye akufanelekanga ukuba benze isigqibo. Ubuncinci akunjalo ukuba oko kuthetha ukuba ixabiso le-vacuum cleaner liphezulu.
Enye ingcaciso ebalulekileyo xa uthenge i-vacuum cleaner eneentambo kukuba uthatha ingqalelo ubude bentambo. Kuba inokuba mfutshane kakhulu kwaye oku kukukhawulela kakhulu ngexesha ucoca. Kuba qho xa utshintsha amagumbi kufuneka uphinde ukhuphe iplagi. Ke intambo ende lukhetho olukhululekile ngakumbi ekusebenzeni.
Abacoci banamhlanje banezihluzi. Uhlobo lokucoca yinto abaninzi abangayihoyiyo, kodwa yinkcukacha ebaluleke kakhulu. Ngenxa yokuba oko kunokukhokelela ekugcinweni okukhulu kwemali kunye nokugcinwa. Ngoko ke kubalulekile ukuba sijonge uhlobo lwesihluzi isicoci esifunxayo esisikhangelayo sinaso.
Eyona nto ixhaphakileyo namhlanje kukuba inesihluzo se-HEPA. Ludidi lwesihluzo eso ifunxa ukungcola okuninzi. Kodwa kwakhona, sinokuyicoca ngokulula ngoko unokuqhubeka uyisebenzisa ixesha elide. Ukongeza, indlela yokucoca olu hlobo lokucoca ilula kakhulu. Kufuneka nje siyimanzise, ​​siyiyeke yome kwaye siyibuyisele kwi-vacuum cleaner. Inkqubo elula.
Sikwanazo nezihluzi eziluhlaza okwesibhakabhaka, ezikhoyo kwezinye iindidi zezicoci ezifana nezo zamanzi. Ziyakwazi nokucocwa kwaye zibe nomthamo ophezulu wokufunxa. Ukongeza ekuncedeni ukuhlambulula umoya. Kodwa zilinganiselwe kwiintlobo ezithile zokucoca i-vacuum.
Abanye abacoci bevacuum banezihluzo ezingaqinisekiswanga yi-HEPA. Olu hlobo lokucoca alukwazi ukucocwa, ngoko ngamaxesha athile sinyanzelekile ukuba sitshintshe. Into engakhululekanga kubasebenzisi. Ukongeza, yinkcitho yemali engeyomfuneko kwiimeko ezininzi.
Ngoko ke, kuyimfuneko ukuba sidibane nodidi lwesihluzi esinaso isicoci sevacuum. Ekubeni isihluzo esinokucoca sesona silungele thina.
Ngokusengqiqweni, ixabiso likwayinkcukacha ebaluleke kakhulu kubasebenzisi. Ekubeni kuxhomekeke kuhlahlo lwabiwo-mali lwethu sinemida ethile kwaye kunokubakho imizekelo esingenako ukuyihlawula. Ngoko ke, kubalulekile ukuba sazi ukuba zeziphi iimodeli ezinokuthi zifikeleleke, ngakumbi kwiintlobo ezithile zokucoca i-vacuum.
Kwimeko apho ujonge isicoci serobhothi, amaxabiso ahlala ephezulu kunemodeli eqhelekileyo. Kwakhona, kwiimeko ezininzi, ngaphezu kwe-euro ezingama-400. Nangona kukho iibrendi ezinemodeli ezingaphezulu nje kwe-200 euros. Ke lutyalo-mali lwexesha elide, kuba bahlala ixesha elide. Kodwa, kubalulekile ukucinga ngayo.
Kukho izicoci zevacuum eziqhelekileyo zawo onke amaxabiso. Sinokufumana izicoci zevacuum malunga ne-80-90 yee-euro ezisinika umgangatho olungileyo. Nangona eyona nto ixhaphakileyo kukuba zibiza ngaphezulu kwe-euro ezili-100, phakathi kwe-100 kunye ne-200 ye-euro sifumana uninzi lweemodeli kwimarike. Uluhlu apho kukho ukuhlukahluka kodwa apho sinokuhamba ngokukhululeka.
Akukho nto ikuqinisekisayo?
Ukuba awukasifumani isicoci sevacuum esilungele le nto uyifunayo, siqinisekile ukuba uya kusifumana kolu khetho lulandelayo lweemveliso:
Fumana zonke izicoci zevacuum zikhona 🙂
Kwiintlobo ezithile ezithe ngqo, ezifana nezicoci zemizi-mveliso okanye ezimanzi, amaxabiso adla ngokuba phezulu noko. Nangona kungekho mahluko mkhulu. Kodwa kubalulekile ukuba uyazi ukuba kwenzekani, ukuphepha ukumangalisa okungathandekiyo kwixesha elizayo. Inxalenye elungileyo yeyokuba uninzi lweempawu ezininzi zisungula iimodeli ezifikelelekayo. Ukuze kube lula kubo bonke abasebenzisi ukufikelela kuzo.
Ngayiphi na imeko, ukuba into oyifunayo kukugcina ekuthengeni isicoci sakho esitsha, kukho iminyhadala apha enyakeni apho sinokufumana unikezelo oluhle kakhulu. Ezinye zezi ntsuku zezi:
NgoLwesihlanu omnyama kwizicoci zevacuum
I-Cyber ​​​​ngoMvulo kwizicoci ze-vacuum
Usuku lweNkulumbuso kwi-vacuum cleaners
Ke ngoko, sifumana izicoci zevacuum ezingabizi kakhulu kwimarike. Kukho iimodeli amaxabiso aqala malunga nama-euro angama-60 kwezinye iimeko. Kodwa, uninzi luhlala lukwicandelo eliphakathi kwe-100 kunye ne-200 yee-euro. Into enhle kukuba umgangatho wabacoci be-vacuum namhlanje uphezulu. Ke iimodeli ezinexabiso elingaphantsi kwe-euro ezili-100 ziya kukunika ukusebenza kakuhle.
ICyber ​​​​Monday Vacuum Cleaners
vacuum cleaners cheap 2022 - Umgaqo-nkqubo wobumfihlo - Ulwazi malunga neicookies